Waddamada dersika sida taxaddarka leh ee ay uga hadleen colaadda Itoobiya | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Waddamada dersika sida taxaddarka leh ee ay uga hadleen colaadda Itoobiya
Waddamada dersika sida taxaddarka leh ee ay uga hadleen colaadda Itoobiya
Dagaalka ka socda dalka Itoobiya ee u dhaxeeya Dowladda dhexe iyo Gobolka Tigraay ayaa socda muddo laba toddobaad ka badan.
Dagaalkaasi oo ka dhashay marki ay dowladda dhex ee dalkaasi Itoobiya ay maamulka Tigraay ku eedeysay maleeshiyaad daacad u ah iney weerareen saldhigga ciidamada federaalka qaybtooda waqooyi uu fadhigoodu ahaa deegaanka Tigraay.
Haddaba, dagaalkaasi tani iyo marka uu billowday waddamada gobolka sidey uga hadleen?
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo muddo aamusaneed ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aaddan dagaalka ka socda dalkaasi Itoobiya.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa boggeeda rasmiga ah ee Twitter-ka ku daabacday qoraal ay taageero ugu muujisay ra’isal wasaare Abiy Axmed oo dagaal kula jira xisbiga TPLF ee maamula deegaanka Tigraay.
Qoraalka hore ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Soomaaliya ayaa lagu yiri “Soomaaliya waxay mar kale xaqiijineysaa inay ku garab taagan tahay dowladda Ethiopia ee uu hoggaamiyo ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ilaalinta nidaamka dastuuriga ah, iyo ixtiraamka midnimada dhuleed ee Ethiopia.”
Qoraalkaas ayaa sidoo kale lagu sheegay inay dawladda Soomaaliya taageereyso midnimada Ethiopia iyo in wada-hadal lagu dhammeeyo khilaafka gudaha ah.
Balse, goor dambe ayuu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo shalay xilka laga qaaday uu barta rasmiga ee Twitter-ka wasaaradda uu ku soo qoray iney jirin war qoraal rasmi ah oo ku aaddan xaaladda Itoobiya oo Soomaaliya ka soo baxay.
Mr Cawad oo BBC u warramay ayaa ka gaabsaday in sababtii xilka loga qaaday ay ahayd warqad maalmo ka hor soo baxday oo ku saabsaneyd mowqifka dowladda Soomaaliya ee dagaalaka Itoobiya.
Madaxweynaha Uganda Yuweri Musevini wuxuu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray inuu billaabayo dhexdhexaadinta Dowladda dhexe ee Itoobiya iyo Deegaanka Tigraay uu dagaalku u dhaxeeya.
Hase yeeshee Mr Museveni ayaa tirtiray qoraal uu barta Twitter-ka soo dhigay oo uu ku baaqay in wadahadallo lagu dhameeyo dagaalka ka socda Tigray kaas oo u dhexeeyo ciidamada dowladda iyo xooggaga TPLF.
Wuxuu Museveni sheegay in dagaalka “uu horseedi doono in dad badan ay dhintaan isla markaana uu curyaamiyo dhaqaalaha”
Waxay u muuqataa in qoraalka laga saaray Twitter-ka.
Lamana ogo sababta qoraalka madaxweyne Museveni looga saaray barta Twitter-ka.
Dowladda Federaalka ee Itoobiya ayaa ku gacan seyrtay baaqii ahaa in khilaafka wadahadal lagu dhameeyo lana joojiyo dagaalka ka socda gobolka Tigray.
Hase yeeshee, madaxweyne Museveni oo la kulmay wafdi ka socday dalka Itoobiya uu hoggaaminayey ra’isal wasaare ku xigeenka Itoobiya Demaqe Makonnin wuxuu u sheegay “dagaalka oo la joojiyo iney dagganaashaha gobolka oo dhan ay dan ugu jirto, Uganada-na ay diyaar u tahay door dhexdhexaadineed iney ka qaadato haddii laga soo codsado.”
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata dhinacyada ku dagaallamaya gudaha dalka Itoobiya wuxuu ugu baaqay iney raadiyaan xal nabaded oo dagaalka lagu soo afjari karo.
Wuxuuna madaxweyne Uhuru sheegay dalalka Kenya iyo Itoobiya iney yihiin lab dal oo muddo dheer ka soo shaqeynayey nabadda iyo xasiloonida gobolka.
“Dowladda dhexe ee Itoobiya iyo Xisbiga TPLF aan ugu baaqayaa colaadda iney dagaalka iska dhigaan maadaamaa coladda iyo dagaalladu ay wiiqayaan dadaallada muwaaddiiniinta dalkaasi Itoobiya ay u galeen horumarinta dalkooda.”
Madaxweyne Kenyata dhinacyada dagaallamaya wuxuu ku boorriyey iney mudnaanta siiyaan arrimaha bani aadaminimada ee shacaka rayadka ah ayna furaan waddooyin gargaarka baniaadaminimada dadkaasi lagu gaarsiiyo.
Wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti waxaa ka soo baxday warqad ay dowladda Jabuuti ku caddeyneyso mowqifkeeda ku aaddan dagaalka ka socda dalka Itoobiya.
Warqadda waxaa lagu sheegay “Jamhuuriyadda Jabuuti xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaday dalka Itoobiya inuu walaac ku abuuray, Jabuutina ay si buuxda u taageereyso midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Itoobiya.”
“Dowladda Jabuutina xukumadda Ra’isal wasaare Dr Abiy Axmed waxay u aqoonsan tahay iney tahay tii xaqiijin lahayd midnimada iyo madax bannaanida dalka Itoobiya.”
Jabbuuti waxay ku baaqday dagaalka gudaha dalka Itoobiya ka socda in nabad lagu soo dabbaalo, iyada oo ballan qaadday iney diyaar u tahay iney taageerto dadaal kasta oo xal nabadeed looga raadinayo qalalaasaha ka taagan dalkaasi Itoobiya.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geellee wuxuu qasrigiisa ku qaabilay wafdi ka socda Itoobiya u hoggaaminayey la taliyaha arrimaha amniga ee Ra’isal wasaare Dr Abiy Axmed, Mr Dagguu Andargaachew.
Wafdiguna waxay madaxweyne Ismaaciil gaarsiiyeen farriin ay ka sideen ra’isal wasaare Dr Abiy Axmed oo ku saabsan dagaalka dalka Itoobiya ka socda.
Dowladda Sudan ayaa waxay ka mid ahayd waddamada sida weyn u soo taageeray halgankii TPLF ay kula jireen dowladdi Mangiste, balse dowladda hadda dalkaasi ka jirta waxay si weyn u taageersan tahay Xukumadda Dr Abiy Axmed.
Dagaalka marka uu billowdayba Suudaan waxay xirtay xadka ay la wadaagto dalka Itoobiya ee ku aaddan gobollada Gaddarif iyo Kassala iyada oo ciidama aad u badan xadka soo dhoobtay.
“Suudaan ciidamo tira badan ayey xadka Itoobiya geysay waxayna tallabbadaasi ka dambeysay isafgarasho ay wada gaareen madaxda Suudaan, Itoobiya iyo Eritrea, balse dagaalka kama qayb geleyso oo waxay ilaashaneyso ammaanka xuduudaheeda” ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidamada Suudaan oo ku sugan xadka Suudaan.
Dowladda Suudaanna waxay sheegtay xadka iney u fureyso oo keli ah shacabka dagaalka ka soo qaxaya balse ay u oggolaaneyn iney maleeshiyaad hubeysan ama shaqsiyaadka ay dowladda Addis Ababa ku raad joogto iney xadka ka soo tallaabaan.
Hase yeeshee baaqyada caalamka iyo waddamada gobolkaba uga imanayey dowladda Itoobiya waxaa gaashaanka ku dhuftay Ra’isal wasaare Dr Abiy Axmed oo sheegay in howlgalkan militeri ee ay xukumaddiisu ku qaaday deegaanka Tigraay uu sii socon doono tan iyo inta sharciga iyo kala danbeynta dib loogu soo celinayo gobolka Tigraay.
Previous articleWasiir Cawad oo si dadban u kashifay sababta rasmiga ee xilka looga qaaday iyo Farmaajo cida amartay..
Next articleShirkadaha Diyaaradaha Soomaaliya oo soo dhaweeyay Go’aan kasoo baxay Wasaarada Maaliyadda
Wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho oo saake loo xiray Salaad Janaaso”Yaa lagu dukanaa”
Sawirro:-Maxay Ka Wada Hadleen RW Kheyre Iyo Haweenka Dhuusamareeb?
Maxoow MD Farmaajo kayiri wasiirada xukumadda Rooble iyo shaqsiyaadka cusub
Kulan muhiimad weyn lahaa oo goor dhow kadhacay villa Somalia loogana hadlaaye…
Puntland oo ka hor timid Guddi ay magacowday Xukuumadda Federaalka Soomaaliya
Daawo:Cabdi wali Gaas oo buugiisa cusub kusheegay ‘Midowga Shayaadiinta’oo ah rag caan ka ah siyaasada oo siweyn looga xumaaday
Daawo vedio:Senator Saciido ”Farmaajo waxa uu baalmaray hanaanka awood qaybsiga beelaha”
DEG DEG:MD Farmaajo oo xilka qaadis kusameeyay madax caan ah kuwa cusubna magacaabay